ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): အနှိုင်းမဲ့ .. ကျေးဇူးရှင်
ရင်ထဲက ကဗျာလေးမှာ ဘ၀မာန်တွေ၊ ယုံကြည်ချက်တွေ၊ လွမ်းမောခြင်းတွေ၊ အောက်မေ့တမ်းတခြင်းတွေ၊ မျှော်လင့်ချက်တွေ၊ တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်ခြင်းတွေ၊ တန်ဖိုးထားတတ်ခြင်းတွေ အချိုးကျ ပါဝင်ပေါင်းစပ်နေကြတယ်.
အထင်ရှားအပြတ်သားဆုံးကတော့ ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ မှန်ကန်စွာ သွန်သင်ပြသလမ်းညွှန်ပေးတတ်မှုကြောင့် ဘ၀ရဲ့ စိန်ခေါ်ချက်တွေကို မကြောက်မရွံ့ နောက်မတွန့်ဘဲ ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်အနိုင်ယူနေတဲ့ မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးရဲ့ ဘ၀မာန်ပါပဲ်.
မလင်းလက်ရဲ့ ဖခင်သာ ဒီကဗျာလေးကို ဖတ်ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက် ကြည်နူးဝမ်းသာ ပီတိဖြာလိုက်လိမ့်မလဲလို့ ကျွန်တော်တွေးကြည့်နေမိတယ်ဗျာ…
ဖခင်မေတ္တာကိုရိုးရှင်းစွာဖွဲ့ ထားတဲ့ချစ်စရာ ကဗျာကောင်းလေးတစ်ပုဒ်…
I hope every father will be like that. But i am so sad about my daughter. She cannot get the feeling as u get.